Kuona Mwari—Zvingaitika Sei Kuti Munhu Aone Mwari Asingaoneki?
Njodzi Dzinongoitika Dzoga Ishamhu yaMwari Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“MWARI Mudzimu,” uye vanhu havakwanisi kumuona. (Johani 4:24) Asi Bhaibheri rinotaura kuti vamwe vanhu vanogona kunzi vakaona Mwari. (VaHebheru 11:27) Izvozvo zvingaitika sei? Zvingaita here kuti unyatsoona “Mwari asingaoneki”?—VaKorose 1:15.
Mamiriro edu ezvinhu tingaafananidza nemunhu akaberekwa ari bofu. Kuva bofu kunobva kwamutadzisa zvachose kunzwisisa zvinhu zvakamupoteredza here? Kwete. Munhu asingaoni ane zvakawanda zvinomubatsira kuziva vanhu, zvinhu, uye zvinenge zvichiitika. Mumwe murume asingaoni akati: “Maziso haasiriwo anoona. Pfungwa ndidzo dzinoona.”
Saizvozvowo unogona kushandisa “maziso emwoyo” wako kuona Mwari kunyange zvazvo usingakwanisi kumuona nemaziso chaiwo. (VaEfeso 1:18) Funga nezvenzira nhatu dzaungashandisa.
“ZVINONYATSOONEKA KUBVIRA PAKASIKWA NYIKA”
Kakawanda nzeve dzemunhu asingaoni dzinonzwa zvakanyanya uye anokurumidza kuziva chinhu paanongochibata, zvomubatsira kuziva zvaasingaoni. Saizvozvowo unogona kushandisa maziso, nzeve, mhino, maoko uye rurimi pakuongorora zvakakupoteredza kuti unzwisise nezvaMwari asingaoneki akazvisika. “Zvaari zvisingaoneki . . . zvinonyatsooneka kubvira pakasikwa nyika, nokuti zvinonzwisiswa panoonekwa zvinhu zvakaitwa.”—VaRoma 1:20.
Funga nezvenyika yedu. Yakagadzirwa kuti tinakidzwe neupenyu kwete kuti tingokwanisa kurarama. Tinofara patinonzwa kamhepo kanofefetera, patinodziya mushana, patinoravira muchero unonaka, kana kuti patinonzwa rwiyo rwunozorodza rweshiri. Zvipo izvi hazviratidzi here kuti Musiki wedu ane hanya, rudo, uye rupo?
Ungadzidzei nezvaMwari pane zvaunoona zvakasikwa? Matenga anoratidza simba raMwari. Zvichangobva kuwanikwa nevesayenzi zvinoratidza kuti madaro ari pakati pezvinhu zviri mudenga ari kuwedzera uye izvi zviri kuitika nokukurumidza zvikuru! Paunotarira mudenga usiku, funga kuti: Simba rokuti izvozvo zviitike riri kubva kupi? Bhaibheri rinotiudza kuti Musiki ane “simba guru.” (Isaya 40:26) Zvinhu zvakasikwa naMwari zvinoratidza kuti ndiye “Wemasimbaose,” ane simba guru.—Jobho 37:23.
Amai vevamwe vakomana vaviri vasingaoni vanoti: “Kutaura ndiko kumwe kunovabatsira zvakanyanya pakudzidza. Vaudze zvose zvaunoona nokunzwa uye iva akagadzirira kuvatsanangurira zvose. Ndiwe maziso avo.” Saizvozvowo, kunyange zvazvo pasina “munhu akamboona Mwari chero panguva ipi zvayo,” Jesu, Mwanakomana waMwari, “ari panzvimbo yepachipfuva chaBaba ndiye akamutsanangura.” (Johani 1:18) Sezvo ari iye akatanga kusikwa naMwari uye ari Mwanakomana akaberekwa ari mumwe oga, Jesu ndiye akava “maziso” edu ekuona zviri kudenga. Ndiye anonyatsokwanisa kutiudza nezvaMwari asingaoneki.
Ona zvishoma zvakatsanangurwa naJesu nezvaMwari, uyo waakapedza makore asingaverengeki ainaye.
Mwari anoramba achishanda asinganeti. “Baba vangu vave vachishanda kusvikira zvino.”—Johani 5:17.
Mwari anoziva zvatinoda. “Baba venyu vanoziva kuti zvinhu zvipi zvamunoda musati mambovakumbira.”—Mateu 6:8.
Mwari anotigovera nenyasha. “Baba venyu vari kumatenga . . . vanoita kuti zuva ravo ribudire vanhu vakaipa nevakanaka uye vachiita kuti kunaye pavanhu vakarurama nevasina kururama.”—Mateu 5:45.
Mwari anokoshesa mumwe nemumwe wedu. “Shiri duku mbiri hadzitengeswi nemari isingakoshi here? Asi hapana imwe yadzo ingawira pasi Baba venyu vasingazivi. Asi imi kunyange bvudzi romusoro wenyu rakaverengwa rose. Naizvozvo musatya: imi munokosha kupfuura shiri duku zhinji.”—Mateu 10:29-31.
AKARATIDZA ZVAKAITA MWARI ASINGAONEKI
Vanhu vasingaoni nevanoona vanowanzosiyana pamanzwisisiro avanoita zvinhu. Munhu asingaoni anganzwisisa mumvuri senzvimbo inotonhorera inodzivirira pakupisa kwezuva, kwete senzvimbo isina chiedza chezuva. Isu pachedu hatigoni kunzwisisa Jehovha kungofanana nemunhu asingaoni zvachose chiedza chezuva kana mumvuri. Nokudaro, Jehovha akatipa munhu akanyatsoratidza zvaari chaizvo.
Munhu iyeye aiva Jesu. (VaFiripi 2:7) Jesu haana kungotaura nezvaBaba vake chete asi akaratidzawo zvakaita Mwari. Mudzidzi waJesu ainzi Firipi akakumbira kuti: “Ishe, tiratidzei Baba.” Jesu akapindura kuti: “Aona ini aonawo Baba.” (Johani 14:8, 9) Zvaiitwa naJesu “zvingakuratidza” chii nezvaBaba?
Jesu aiva neushamwari, aizvininipisa, uye aitaurika naye. (Mateu 11:28-30) Unhu hwake hunofadza hwaiita kuti vanhu vade kuva pedyo naye. Jesu airwadziwa vamwe pavairwadziwa, uye aifara pavaifara. (Ruka 10:17, 21; Johani 11:32-35) Paunoverenga uye kunzwa nyaya dzemuBhaibheri dzinotaura nezvaJesu, shandisa pfungwa dzako kuti nyaya dzacho dzinyatsoita sedziri kutoitika. Kana ukafungisisa mabatiro aiita Jesu vanhu, uchakwanisa kunyatsoona kunaka kwaMwari uye uchaswedera pedyo naye.
KUITA KUTI ZVIVE NEMUSORO
Mumwe munyori akataura nezvemanzwisisiro anoita vanhu vasingaoni zvinhu zviri munyika achiti: “Anowana mashoko ari muzvidimbu zviduku, zvichibva pazvinhu zvakawanda (zvakadai sekubata, kunhuwidza, kunzwa nezvimwewo), uye anofanira kubatanidza mashoko acho kuti pabude chinhu chakazara.” Saizvozvowo, paunoona zvinhu zvakasikwa naMwari, woverenga zvakataurwa naJesu nezvaBaba vake, uye woongorora maratidziro akaita Jesu unhu hwaMwari, unobva wanyatsonzwisisa nezvaJehovha. Achava wechokwadi kwauri.
Izvi ndizvo chaizvo zvakaitika kuna Jobho, uyo akararama kare. Pakutanga aitaura ‘asinganzwisisi.’ (Jobho 42:3) Asi pashure pekunyatsoongorora zvisikwa zvinoshamisa zvaMwari, Jobho akataura kuti: “Ndakanzwa nezvenyu norunyerekupe, asi zvino ziso rangu rinokuonai.”—Jobho 42:5.
‘Kana ukatsvaka Jehovha, achaita kuti umuwane’
Izvi zvinogona kuitikawo kwauri. “Kana ukamutsvaka [Jehovha], achaita kuti umuwane.” (1 Makoronike 28:9) Zvapupu zvaJehovha zvichafara kukubatsira kutsvaka uye kuwana Mwari asingaoneki.